.Lọ > Ngwaahịa > Igwe temometa ahụ na-agbagide ọhụụ nke Ahụike
Ọkwa ahụnke ahụ dị ọcha, ọ dị ọcha, nwee ahụike, iji zere ibute ọrịa na ngwa ngwa iji dozie nsogbu nke ịhụnanya nwatakịrị, n'oge ọrịa pụrụ iche, ọ nwere ike hụ mmelite na-abụghị kọntaktị okpomọkụ nke ndị ọzọ, belata ike ma gbochie nnyefe nje a na-ebute.
* Ergonomic imewe-eme ka ahụmịhe ya dịkwuo mfe ma tụọ ya nfe.
* Ngwongwo PP nke di elu ma-n’eme ka gburugburu gi mee ihe gi nke oma. Ntuziaka ziri ezi-ọgụgụ akwụkwọ ihuenyo buru ibu, ihe ọkụkụ ngwa ngwa na 1 sekọnd,
Agba agba ọkụ dị iche na ọkwa dịgasị iche iche. A na -eme ihe onyonye ihe: tụọ elu mmiri ihe, okpomọkụ nke mmiri ịsa nwa ma ọ bụ mmiri ara ehi, wdg A họrọ oke ya ozugbo, ogo ngosipụta bụ 0.1 ° C / 0.1 Celsius F. Ọrụ njigide data akpaaka na mmechi akpaka. ọrụ
Gun egbe etupo igwe eji atunye ihe, ngwaọrụ ekwenye ekwenti di omimi
Anyị ọkachamara na n'ichepụta na imepụta Infrared okpomọkụ measuring gun, na-abụghị kọntaktị dijitalụ laser okpomọkụ atụ ngwaọrụ, mbupụ na ọkọnọ Infrared okpomọkụ atụ igwe egbe, na-abụghị kọntaktị dijitalụ laser okpomọkụ atụ ngwaọrụ.
Dijitalụ na-achọpụta ihe gbasara ahụ
Dijitalụ na-achọpụta ihe dị iche iche na-ahụ igwe nwere ahụmịhe igwe nwere ahụmịhe bara ụba na ụlọ ọrụ akụrụngwa. Anyị na-ọkachamara na n'ichepụta na n'ichepụta Digital ahu otutu ihe ịchọpụta ahu okpomọkụ ahu Izu, mbupụ na ọkọnọ ogo elu Digital ahu ihe ịchọpụta ahu okpomọkụ ahu.
Dijitalụ Igwe eji Igwe Ọdụdọ N'ịga Ahụ Igwe Ọdụdọ Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Ọdụdọ
Usoro eji arụ ọrụ ọdịnala: Inhibidoro ihe eji arụ ọrụ ọpụpụ, ntụgharị mmetụta, nsonaazụ ziri ezi. ọ̀tụ̀tụ̀ ahụ ọ̀ha ahụ na-arụ ọrụ, nha ọ̀ha ahụ na-ahụ maka ụlọ ahịa, na-enwe ahụ ọ̀ha ahụ n’obodo, na-enwe ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ nke ahụ́ na ahịa akwụkwọ nri.
FDA CE Nnabata Igwe temometa ahụezuazu FDA CE gbawara ama ama ihe mkpuchi ahụ. Arụmọrụ / Ọrụ: Mmesho ogo ahụ, tụọ nha ihu igwe. Maka klaasị ọgwụ. Inyocha nje maka nje ahụ.
Ngwongwo oria a na - akpọ oria na - akpabeghị ọgwụ ị na - ejikọtara onwe ya maka mmerụ ahụ ọhụhụ. Ọrịa a abụghị ihe m ga - akpọtụrụ, hichaa ya na ahụike zere ofufe oria. n’etinyeghị ibe ha aka. Zere kọntaktị na ịgbasa nje.
Igwe temometa ahụ na-agbagide ọhụụ nke Ahụike Azụ ahịa Igwe temometa ahụ na-agbagide ọhụụ nke Ahụike nke emepụtara na China site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ a na-akpọ Zhongxinchuang. nke bụ otu n’ime ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ihe si China. Nabata ịzụta Igwe temometa ahụ na-agbagide ọhụụ nke Ahụike jiri ọnụ ahịa dị mma nke nwere CE, FDA, COI, PMD Act na NIOSH. You chọrọ ndepụta ọnụahịa na nkọwapụta? Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike ịnye gị.